"Fa matahotra aho, fandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsiam-po sy ny fahadiovana amin'i Kristy" - 2 Kor. 11:3
Izay mitandro ny fahatsorana amin'ny fahazarany rehetra, ka mifehy ny filana sy ny faniriana, dia afaka mitahiry ny sainy ho matanjaka, salama, mavitrika. Hahatakatra haingana ny zavatra rehetra izay mitaky fandinihana na asa koa izany sainy izany, ary maranitra tsara ka afaka manavaka ny masina sy ny tsy masina. Vonona koa izany hanatanteraka izay asa rehetra manome voninahitra an'Andriamanitra sy mitondra soa ho an'ny taranak'olombelona. — ST, 29 Septambra 1881
Tokony hobeazina ao amin'ny fahatsorana ny ankizy. Tokony hozarina hianina amin'ny adidy kely sy mahasoa, sy amin'ny fifaliana mbamin'ny fanandramana izay sahaza ny taonany izy ireo (...) Tsy tokony hoterena ho matotra alohan'ny fotoana ny ankizy, fa tokony hotehirizina ela araka izay azo atao ny fahatsoran'ny taom-pahazazany. Arakaraka ny maha-tony sy tsotra ny fiainan'ny zaza — arakaraka ny tsy hisian'ny zavatra manaitaitra sy ny hisian'ny firindran'ny fiainany amin'ny natiora — no hahazoany tanjaka ara-batana sy ara-tsaina ary hery ara-panahy.
Tokony hampirisika ny ankizy amin'ny alalan'ny ohatra asehony ny ray aman-dreny mba hamboly fahazarana ho amin'ny fahatsorana, ka hisintona ny zanany hiala amin'ny fiainana feno rentirenty, fa hanazatra azy kosa amin'ny fiainana tsotra. Ny ankizy tena maha-te ho tia dia izay tsotra sy tsy miseho ivelany. —CG, 139
Nahavariana ny olona Ilay Mpampianatra lehibe indrindra teto amin'izao tontolo izao, noho ny fahatsorany. Nasehony tamin'ny fomba tsotra mantsy ny fahamarinan'Andriamanitra ka na ny ankizy aza nahatakatra ny teniny. Sady nahaliana ireo manam-pahaizana ambony indrindra sy ireo mpandinika ny Soratra Masina nikoizana indrindra koa anefa ny teniny. Tamin'ny alalan'ny sary an'ohatra mahazatra ny olona no nanehoany mazava tamin'ny olon-tsotra ny fahamarinana. Tamim-pahatsorana no namafazany ny voan'ny filazantsara tao an-tsaina sy tao am-pon'ireo mpihaino Azy, ary nitsimoka sy namoa ho fiainana mandrakizay izany. Tao amin'ny fahatsorany tokoa no nisy ny voninahiny. — YI, 04 May 1893.